Mascara "Yves Sen Loran" kuyinto Wand real magic ukuthi ungakha ekhungathekisayo iso makeup futhi sibheke ukwenza ezijulile futhi ekhululekile. Lezi izindlela izimonyo nemihlobiso, ekhishwa fashion house French anezakhi ezimangalisayo ezenza ethandwa kakhudlwana phakathi kwezinye brand.
Basuke benawo design yesiteleka, ocebile umbala zombala kanye ukuthungwa olubucayi ukuthi ngeke abashiye nandaba noma yiziphi ubulili bubuhle. Zonke izidumbu lokhu brand ngezithako zawo aqukethe okunomsoco, amaminerali zokuzivikela futhi amafutha, ngakho ezidume ngakho kakhulu phakathi kwabesifazane.
Mascara Volume Effect Faux Cils yasungulwa ngo-2000 ngu "Yves Sen Loran". Mascara iminyaka labo nangobudlova wadala furor, kodwa ngo-2015 kwaba neliphelele kunalelo. ifomula yakhe ezivuselelwe manje iqukethe amafutha ocolisekileyo, argan futhi safflower amafutha ukuthi uthuthukise eyelashes fibre emangalisayo, abenze bheka eside. ifilimu abahlukile umboza futhi raspushivaet kubo, futhi inikeza imiphumela bushelelezi.
Ngenxa isakhiwo zinkulu, okuye kwenza indlela izimonyo zokuhlobisa kusuka "Yves Sen Loran", Uyinki asisho anamathele the eyelashes nomunye futhi kubenza eside, zazivuma, elithambile nesisontekile, ukudala umphumela isandiso. Vinyl polymer amafomu phezu yalo ongabonakali ifilimu, esinikela umbala fastness.
Lokhu kusho kusuka YSL kungasiza zephule stop cilia futhi bheka enempilo futhi ibhulashi yayo ekhethekile uyakwazi ngokunembile futhi ngobumnene ukupenda phezu ngisho nezinwele emfushane.
Kulesi umugqa inkampani French inikeza abesifazane imfashini hhayi kuphela standard black umbala, kanye onsomi, cherry, burgundy, umbala ebusuku obumnyama kanye ensundu blue Mascara Volume Effect Faux Cils ngokusho kwezinye izincwadi, amantombazane ukubheka nangaphakathi futhi engaqondakali kakhudlwana.
Lokhu kusho izimonyo French kungaba umphelelisi iyiphi ukubukeka. Ivolumu Effet Faux Cils Baby Doll has design stylish nenhle, okusikhumbuza ipensela case-segolide umbala, ukuze noma iyiphi intokazi Kungaba mnandi ukuba babe Mascara esikhwameni sakhe. ezintsha elastomer ibhulashi yayo nge Imicu yotshani encane kuzodala ivolumu emangalisa ukuba unwele ngalunye futhi zibukeke bandise amehlo futhi wenze inqubo yesicelo izindlela lula futhi elula.
Lokhu Mascara kusukela YSL kufanelekile zonke izinhlobo eyelashes, kufanelana kahle futhi akusho ewa emini. Kusho uchungechunge Baby Doll uyonika intombazane ngayinye bheka emangalisayo unbuttoned likhipha Ukubengezela futhi amehlo abanye.
Mascara Volume Effet Faux Cils okunyanyisayo
Uma ufuna ukunikeza amehlo akho Ukwanelisa inkanuko futhi ukujula, siyafuna kudingekile ukukhetha indlela izimonyo zokuhlobisa kusuka "Yves Sen Loran". Uyinki kusukela kulolu chungechunge uzokwenza eyelashes eside, uqweqwe okukhulu, okwenza amehlo ngeke ibe nomphumela kumnandi futhi engaqondakali.
Lokhu ejenti French uba nombala zikanokusho. ibhulashi yayo elula ngokulinganayo imibala unwele ngalunye kusukela empandeni kuya enika, kuyilapho ukuhlukana futhi oqeda cilia. Ingcina oyingxenye isidumbu, uyakwazi ukumelana usuku lonke. Futhi, lokhu ifomula kusho abasizakali uwoyela Jojoba, kuyinto izifunzo omkhulu kunomphumela firming futhi ongaqeda thinning. Lo mugqa ukwakheka kusuka YSL ukwazi ukwenza iso kakhulu, ke umelwe shades ezifana: Deep Black (black ezijulile), Ashy Black (umlotha-black), Bronze Black (zethusi black), oLwandle Olumnyama (inki okwesibhakabhaka esekelwe ithoni black), Cherry Black (black cherry) kanye Jade omnyama (abamnyama jade).
Ngamunye zonke izindlela ngenhla izimonyo zokuhlobisa uyakwazi ukunikeza umthamo emangalisa nemivimbo engu akho, abenze Fluffy kakhulu futhi eside. Lezi isidumbu French uma sisebenzisa izinwele wabe, upende ephelele ngakho wabaphumela evela impande ukuze enika.
Zonke lezi zimali kusuka YSL babe kwetinhlobo letikhetsekile schotochek ezikuvumela udale ngokushesha umphumela "okwandisa", futhi ukusiza ukunikeza elithakazelisayo cilia goba.
Inzuzo elingenakuphikwa lokhu kusho of "Yves Sen Loran" - Mascara has a tube ukhululekile futhi stylish. Ngaphezu kwalokho, ngamunye wabo has a ukuthungwa nice and ukunambitheka olubucayi.
Zonke izindlela izimonyo zokuhlobisa kusuka YSL efanelekayo emini futhi kusihlwa ukwakheka, okuyilona elisebenzayo futhi kubalulekile lapho ukhetha kubo. Usuku lonke, Mascara hhayi ezigcotshwe, hhayi yithela noma sihleli isikhumba. Basuke bonke isicelo ngokuphelele ngaphandle izigaxa noma amahlule.
abesifazane abaningi bakhetha izidumbu inkampani-umakhi ngenxa nokuqina kwazo okumangalisayo kuye, ukuze bahlale phambi esingaphezu kosuku. Ngaphezu kwalokho, noma yiziphi lezi zindlela izimonyo zokuhlobisa kusuka YSL defies imvula. Futhi, njengoba kushiwo ngaphambili, bude kakhulu ngisho uma isicelo kwelinye kuhla eyelashes.
I ethile kuphela, ngokusho kwabanye abesifazane, wukuthi bangakwazi wome phakathi nezinyanga ezine ngemva kokutholakala kwayo, uma ungenaso isikhathi ukusebenzisa.
Kodwa, naphezu leli phutha ezincane, abesifazane abaningi ngokukhetha ukwenza izidumbu zazo "Yves Sen Loran". Izibuyekezo babo ikakhulukazi omuhle. Abaningi, bakhetha, ngoba bengakwazi baxabane nomzimba futhi akavumi ukuba awunankinga nhlobo.
Hashaza off izimali izimonyo umbala kusuka YSL kulula kakhulu, futhi ungasebenzisa le mikhiqizo zokususa izimonyo. Abanye besifazane abangamaRom babesizakala belulekwa ukuba ugweme omiswe inki, udinga nje close ezinhle epayipini elincane ukuchofoza, ngakho-ke, liyokuma eningi isikhathi eside.
Amantombazane amaningi nge short cilia ezimhlophe ikakhulukazi bajabula ngokukhululwa izimali isiFulentshi, ukudala umphumela ukunwetshwa. Bathi nezinwele ngempela babe eside kakhulu futhi fluffier, futhi musa banamathelane usuku lonke. Ngiphakathi inki kusuka brand okunethezeka, ngokombono wabo, akakwazi ukunikeza umphumela emangalisa kangaka. Ngenxa ifomula eziyingqayizivele leli thuluzi olusha "emithathu ungqimba ifilimu," cilia esehlelembe futhi ibe kukhanye emangalisayo.
Okungenani umkhiqizo esiyingqayizivele akhiwa le nkampani French kuyinto Mascara ukuthi uthembisa ukuzinikeza abesifazane Doll ukubukeka. Abesifazane abaningi abaye esetshenziswa loku kusho ukuthini izimonyo nemihlobiso, bathi uyakwazi ukwenza nemivimbo engu emangalisayo eside ngenkathi sigcina umsungulo yabo. Lokhu Mascara usengakwazi Kuhlukanisa kuphinde ngokucophelela ukupenda phezu unwele ngalunye, enika cilia ocebile, nehlala njalo umbala, futhi bheka - a Ukungena ekhethekile. Lo mkhiqizo izimonyo nemihlobiso, kusukela izimpendulo zabesifazane, kanye nezinye izimali lenkampani, kuba ngokuphelele ephephile isikhumba namehlo.
Angathengwa ngasiphi Mascara izimonyo okukhethekile esitolo "Yves Sen Loran". Intengo cishe libukeka kanje:
Mascara Volume Effect Faux Cils izobiza okuyisilinganiso sabangu-ruble 1,800.
Mascara Volume Effet Faux Cils Baby Doll - izindleko isilinganiso lokhu Mascara kuyinto ruble 2000, kodwa kwezinye izitolo esimweni ukwabelana kuyoba eshibhile amaphesenti amathathu ..
Mascara Volume Effet Faux Cils Okuthusayo - wentengo amabanga kusuka 1820 kuya ruble 1870.
Nanoma inki kusukela imfashini endlini French "Yves Sen Loran", ummeleli we nengxenye enhle lwesintu ngamunye abakwazi ukhathazeke isimo okuphelele kwezimfanelo zakhe ukwakheka usuku lonke, ngoba sibonga leli thuluzi elihle, ungathola i ivolumu kakhulu futhi eyelashes Amazing eside, edonsela bencoma nhla yabanye.
Homeland ikhukhamba kanye izakhiwo zalo nenzuzo